Laby: mutambo mudiki wekudzidzisa vana kukodha | Linux Vakapindwa muropa
Laby: uye kuti vana vadiki vanodzidza kuronga
Kune akawanda uye mamwe mapurojekiti anoitirwa kutidzidzisa tese kuronga, kunyanya vadiki kana avo vasina fungidziro yepamberi. Isu tatove takatsanangura mimwe mienzaniso yakakosha pano, senge Scratch. Naizvo, laby ndeimwe yemapakeji ayo anozivisa vana kuchirongwa nenzira yakapusa uye yakapusa nemutambo.
Mudiki mutambo unosanganisira kutungamira chidiki diki pane iyo skrini kusvikira iwe wabuda nepasuo. Kuti uite kufamba kana zviito, mushandisi anofanira kunyora akateedzana emitsetse yekodhi nezviito zvinofanirwa kuitwa. Iyo syntax inogona kunge yakaita seC mutauro, Python, Ruby kana Java.
Chese chiitiko chingaitwe netupukanana chinoenderana nebasaNekupedzisa iyo script kana chirongwa nezvakakodzera mabasa kuti ubude kunze kweiyo maze, iwe unozogona kukunda iro dambudziko. Unogona kushandisa iyo bhatani kuita chirongwa uye enda nhanho nhanho mukuitwa kwekodhi kuti uone kuti chipembenene chinoita sei nemabasa awakatsaurira.
Kana iwe uchifarira Laby uye une Ubuntu, unogona kuitsvaga zvakananga muSoftware Center kana kuiisa kubva kuchiteshi. Imwe sarudzo ndeyekuenda kune peji reiyi yakavhurwa sosi purojekiti ku GitHub. Zvino, usatarisira zvishamiso, mwero wavo wakanyanya kukosha, asi kuti mwana atange zvakanaka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Laby: uye kuti vana vadiki vanodzidza kuronga
Paive neimwe inonakidza kwazvo chirongwa chekudzidzisa chirongwa chinonzi:
Ndatenda zvikuru neruzivo, ini ndanga ndaisa pasuru iyi uye ndiri kungoedza .. ndichaiisa kumuchina wevana vangu: D ... uye nezvegwara .. ndichaiyedza senzira yakanaka ..
Shashlik: mhanyisa Android maapplication paGNU Linux
steghide: steganography yekuvanza zvinyorwa mumifananidzo